पार्टी फुटेपनि कानूनी रुपमा नेकपा बहुमतमै : के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
नेपालगाथा २०७७ फाल्गुण १२ गते बुधबार ११:४७:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? भन्ने आम चासो रहेको पाइन्छ । नेकपाको विभाजनले कानूनी मान्यता पाइनसकेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पहिलेकै अविश्वास प्रस्तावलाई संसदमा लैजान्छ कि दलको नेताबाट हटाउने वैधानिक प्रक्रियामा जान्छ ? भन्ने चासो बढेको छ ।
यी दुई प्रक्रियाबारे कुनमा जाने भन्नेमा अझै प्रचण्ड माधव समुहले प्रष्ट धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन । आफ्नै दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउन संसदमा अबिश्वास प्रस्ताव ल्याउन लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिश राष्ट्रपतिले बिघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वाेच्च अदालतले हिजोफागुन ११ गते बदर गरेको छ । पुनस्थापनापछि अव प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहले कुन बाटो अबलम्बन गर्छन भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । कानूनी रुपमा नेकपा अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा छ । संसदीय दलको नेता वैधानिक रुपमा ओली नै हुनुहुन्छ ।
यद्यपि विघटनपछि अर्को पक्षले प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि दलको नेता चयन हुनुपर्ने बताउनु हुन्छ । संसदीय दलको नेता ओली नै फेरि पनि चुनिनुभयो र नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता पाएन भने उहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुनसक्ने तर अहिलेकै सरकार भने निरन्तर नहुने अधिकारीको तर्क छ ।
तर प्रचण्ड-माधव समुह त्यो प्रक्रियामा जाने पक्षमै देखिएको छैन । ओलीलाई दलमा हराउन सकिन्न भन्ने सो समुहको निचोड छ । नेकपाको विभाजन कानूनी रुपमा नभइसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने कि ३ अनुसार भन्ने अन्योल कायमै छ । उपधारा २ अनुसार बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको बारेमा निर्णय नगरेसम्म दल एकीकृत नै रहने र दुइटा गुटका रुपमा सक्रिय हुने देखिएको छ । दल विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउन्जेल वा एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ता नगरेसम्म नेकपा बहमुत प्राप्त दलकै रुपमा रहने छ ।